ओलीसँग तनाव बढेका बेला एकाएक किन भारत जाँदैछन् प्रचण्ड ? यस्तो रहेछ कारण — Imandarmedia.com
ओलीसँग तनाव बढेका बेला एकाएक किन भारत जाँदैछन् प्रचण्ड ? यस्तो रहेछ कारण
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहाललाई थप उपचार गर्न आज भारतको मुम्बई लगिँदै छ । उनलाई बिहान ११ बजेको उडानबाट मुम्बई लैजान लागिएको हो ।
सीताको साथमा अध्यक्ष प्रचण्ड र छोरी गंगा दाहाल पनि साथमा रहने प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । ओलीसँग विभाजित भएका प्रचण्ड पत्नीको उपचारका लागि भारत जान लागेका हुन । सीता दाहाल पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोगले पीडित छिन् । त्यसलाई ‘प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पी.एस.पी.)’ भनिन्छ ।
नेशनल हेल्थ सर्भिस, ब्रिटेनका अनुसार पीएसपी एक दुर्लभ स्थिति हो, जसका कारण मानिसको मानसिक असन्तुलनका साथै हिँड्न, बोल्न र निल्नसमेत कठिन हुने गर्छ । मस्तिष्कको कोषिकामा क्षति हुँदा यस्तो समस्या देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा भैसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरी घरमै आराम गरिरहेकी दाहाललाई सोमबार मुम्बई लगेर न्युरो सम्बन्धी चिकित्सकबाट स्टिम थेरापी गराइने पारिवारिक स्रोतले बतायो । सीता यसअघि पनि उपचारका लागि अमेरिका, सिंगापुर र भारत गएकी थिइन् ।
ओलीको अराजनीतिक टिप्पणी : सहिद भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो
नेकपा ओली समूहका नेता एवं कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहका नेताहरुमाथि ‘श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो’ भन्दै अराजनीतिक टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौंको कार्की बैंक्वेटमा आइतबार आयोजित आफू निकट अनेरास्ववियूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले छुट्टै बैठक गरेका प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई अराजनीतिक तरिकाले आलोचना गरे ।
उनले भने, ‘तपाईंहरु सहिद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो । तपाईंहरु सहिद त होइन । अब तपाईंहरुलाई कार्यक्रमहरुमा स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । खाली तपाईंहरुले धुलो उडाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले पानी छर्किनुपर्छ, त्यत्ति हो । तपाईंहरुले दुर्गन्ध फैलाउनुहुन्छ, त्यहाँ अत्तर छर्किनुपर्छ ।’
यति भन्दा–भन्दै पनि ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका नेताहरुलाई पार्टीमा आउन आग्रह गरे । नेताहरुमा कुर्सीको पीर भएकाले कुर्सी यथावत राखिएको भन्दै उनले भने, आउनुस् । तर, उहाँहरु आउनु भएन भने पनि यो अभियान अगाडि बढ्छ । दुई–चारवटा पीलो निचोरियो भने पनि वजन घटेको हुन्न भनेजस्तै अझ पीडारहित भएर अगाडि बढ्छ ।’
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गरेर स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत चुनौती दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार आफू पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको जिकिरमात्र गरेनन्, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै नहुने दाबीसमेत गरेका थिए।
देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो दावी गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप ठहरिँदैन ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा यसरी प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आउनु राम्रो नभएको तर्क गर्दछन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको मुख्य प्रत्यर्थी नै प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख पनि हो, त्यसैले आफू प्रत्यर्थी रहेको विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संवैधानिक रुपमा प्रश्न उठेको र संवैधानिक प्रश्नकाबारे सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको उनले बताए ।
राज्यका तर्फबाट होस् वा राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट, न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा यस प्रकारको टिप्पणी आउन नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘आफ्ना सरोकारलाई त्यो रुपमा कसैले पनि व्यक्त गरिदिनु भएन, जुन रुपमा व्यक्त गर्दा अदालतको निर्णय प्रक्रियाको महत्व घट्न जाओस्,’ उनले भने ।
फेरि आगो ओकल्न थाले ओली !
हरेक दिन जसो पार्टीको भेला बैठकमा जाने र सम्बोधन गर्छन् । र, बिचमा केहि मथ्थर भएका उनी पहिलेकै ओली सुनिन थालेका छन्, अर्थात् उखान टुक्का र कडा कटाक्ष हानेर आगो ओकल्ने ओली ! शनिबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित आफ्नो समूहका काठमाडौं जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा पनि ओलीले पूर्वसहकर्मी प्रचण्ड र माधवनेपाल कडा कटाक्ष गरेका छन् ।
सम्बोधनको शुरुबाटै ओली प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहविरुद्ध खनिए । उनले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई खिया लागेको नटबोल्ड, कुहिएको फलसँग दाँजे । प्रचण्ड, माधवहरुकै कारण एकता गरेको तीनवर्षसम्म पार्टीले गति लिन नसकेको निष्कर्ष सुनाउँदै ओलीले भने, ‘दुइटा नटबोल्ड फेर्दा गाडी अगाडि ।’
हामीले फेरेको पनि होइन, आफैं फुक्लिएको नटबोल्ड । खिया लागेका दुईवटा नटबोल्ड फुक्लिएको थियो, पार्टी गतिसाथ अगाडि गयो ।’ पार्टी वैधानिकताको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड र माधवलाई कटाक्ष गर्दै ओलीले पेडा पसलेको संज्ञा दिएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले पत्र प्राप्त गरेँ । उहाँहरुले निवेदन हाल्नुभएको रहेछ असली हामी हौं भनेर’ उनले भने, यो बरमझियाको पेडा पसल हो ? असली र नक्कली हुन ।’
नेकपाको वैधानिकता आफ्नो समूहले पाउने दाबी गर्दै उनले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले चार्ली च्याप्लिन चिन्ने तर्क गरे । ‘जसको घर हो, उ निवेदन हाल्न किन जान्छ ? उनले प्रश्न गरे । आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा असली भएकाले सूर्य चिन्ह पनि आफूहरुकै भएको उनको जिकिर थियो । ‘कार्की ब्याङ्क्वेटमा खानपिन गरेर केपी ओलीलाई निकाल्दिऔं भनेर घोषणा गर्नुभएछ । निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाउनु भएछ केपी ओलीलाई निकाल्यौं भनेर । त्यो हेरेर निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छैन’, उनले भने ।
ओलीले पूर्व सहकर्मीद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई कुहिएको फलसँगै दाँजेका थिए । आधिकारिक नेकपा आफूहरुको भएको प्रचण्ड-माधव नेपालको दावीतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘अब, भेट्न कुहिएर झरेको दुइटा फलहरुले रुख मै हुँ भनेर दावी गर्ने ?’
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुनियाँ आश्चर्य चकित हुने गरी काम गरेको दावी गरे । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई भारतका प्रधानमन्त्री र चीनको राष्ट्रपतिले साथ दिने बताइरहँदा आफ्नै पार्टीका नेताहरुले साथ नदिएको ओलीको कथन थियो ।
‘प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले बोलेको सुन्नुभएको छ ? एउटा भनाइ छ नि ढुंगो बोल्ला, ऊ बोल्दैन’, ओलीले भने । देशको नक्सा छाप्दा र विकास हुँदा छटपटी हुनेहरुले धराहराको २२ औं तलबाट खिचिएको तस्वीर नदेखेको उनले बताएका छन् । ‘त्यहाँ पत्रकार गएर फोटो खिच्यो, यस्तो देखिन्छ काठमाडौं’, ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल निकै अगाडि बढेको दावी गरे ।